Victoria Secret Model တို့ရဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်ကပုံနဲ့ အပြင်ပုံ ဘယ်လို ကွာခြားလဲ??? - For her Myanmar
Victoria Secret Model တို့ရဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်ကပုံနဲ့ အပြင်ပုံ ဘယ်လို ကွာခြားလဲ???
အိုမို.. အိုမို… <3
မော်ဒယ်လ်တွေထဲမှာ Victoria Secret Model ဆိုရင်ကို လုံးဝ အလန်းစားမော်ဒယ်လ်လေးပဲလို့ သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ လျှောက်လမ်းပေါ်မှာဆိုရင်လည်း နတ်မိမယ်လေးတွေလို ငေးနေရအောင်လှတာလေ။ မိတ်ကပ်တွေ၊ အဝတ်အစားအလန်းတွေနဲ့ ငေးလောက်အောင်လှတယ်ဆိုတော့ အပြင်လောကမှာရော သူတို့တွေက ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်မယ်လေ။
(၁) Candice Swanepoel
Victoria Secret ရဲ့ နတ်မိမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Candice Swanepoel က ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဈေးအမြင့်ဆုံးမော်ဒယ်လ်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံက Instagram မှာ သူ တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က သူ့ရဲ့ ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Romee Strijd
ဒီပုံကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လောက်က စတင်ပြီး Victoria Secret မော်ဒယ်လ်ဖြစ်လာတဲ့ Romee Strijd ရဲ့ Instagram က ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ သူတော့ တော်တော် ကွာတယ်နော်… ဟီး.. စင်ပေါ်မှာ ညှို့အားအရမ်းပြင်းပြီး အပြင်မှာတော့ လှလှလေးပေါ့နော်..
Related Artilce >>> လျှောက်လမ်းပေါ်မှ ထူးထူးဆန်းဆန်းဖက်ရှင်များ
(၃) Taylor Hill
Taylor Hill ဟာလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်လောက်က စတင်ပြီး Victoria Secret Model ဖြစ်လာခဲ့သူပါ။ ဒီမှာလည်း သူ့ရဲ့Instagram က ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံကို တွေ့ရမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လှတာကတော့ လှတာပဲနော်..
(၄) Behati Prinsloo
Behati Prinsloo ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက Victoria Secret Model ဖြစ်လာခဲ့သူပါ။ ကလေးနှစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ Instagram က ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံမှာ ကွာခြားချက်လေးတွေ တွေ့မြင်ရမှာပါနော်… အက်ဒ်မင့်မျက်လုံးထဲတော့ နှစ်ပုံလုံးမှာ လှနေတာပဲ 😀
(၅) Lily Aldridge
Lily Aldridge က ၂၀၁၀ ကတည်းက Victoria Secret Model ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဈေးအမြင့်ဆုံးရတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လမ်းပေါ်က စူးရှပြတ်သားတဲ့ မျက်နှာအနေအထားနဲ့ သူ(မ)ရဲ့ အပြင်က မျက်နှာချိုချိုလေးက အတော်ကွာခြားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါနော်..
(၆) Elsa Hosk
Elsa Hosk ကလည်း ၂၀၁၅ မှာ Victoria Secret Model ဖြစ်လာသူလေးပါ။ သူ့ရဲ့ Instagram မှာ တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ နဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံကတော့ တော်တော်ကွာတယ်လို့ အက်ဒ်မင်ထင်မိတာပဲ.. ယောင်းတို့ရော ဘယ်လို ထင်လဲ???
(၇) Jasmine Tookes
Jasmine Tookes ဟာ ၂၀၁၅ မှာ Victoria Secret Model ဖြစ်လာကတည်းက ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ လူစိတ်ဝင်စားခံရသူလေးဖြစ်လာတာပါ။ သူ့ရဲ့Instagram မှာ တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ယောင်းတို့ ဘာမြင်လဲတော့မသိဘူး.. အက်ဒ်မင်တော့ သူ့ရဲ့ ညက်နေတဲ့ အသားကိုမြင်တာပဲ .. လှလိုက်တာ T.T
Related Article >>> 2018 Miss Universe သရဖူကိုဆွတ်ခူးသွားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ် Catriona Gray
(၈) Alessandra Ambrosio
Victoria Secret Model ဖြစ်တဲ့ Alessandra Ambrosio ရဲ့ သူ့ရဲ့Instagram က ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံတို့ကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့…. မပြောင်းလဲတာက သူ့ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ဟန်ပဲလို့ အက်ဒ်မင် ထင်ပါတယ်နော်…
(၉) Adriana Lima
Adriana Lima ဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက Victoria Secret Model ဖြစ်လာသူပါ။ သူဟာ လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ သက်တမ်းအကြာဆုံးမော်ဒယ်လ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Instagram မှာတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး မတူညီတဲ့ အလှတရားတွေကို ခံစားကြည့်ကြပါဦး ယောင်းတို့ရေ…
(၁၀) Josephine Skriver
Josephine Skriver ကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြီး Victoria Secret ရဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်ရောက်လာသူပါ။ ဒီမှာတော့ Instagram မှာ မိတ်ကပ်မပါဘဲ လှနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်က ပုံတစ်ပုံတို့ကြားက ကွာခြားချက်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်။
အခုတွေ့ခဲ့ရတာတွေက Victoria Secret Model တွေရဲ့ လျှောက်လမ်းပေါ်ကပုံနဲ့ အပြင်ပုံတွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေပါပဲ။ ဒီလိုတွေ့ရတော့ သူတို့ဟာ မိတ်ကပ်တွေမပါဘဲလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာမြင်ရမှာပါ။
ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အလှပါရမီကောင်းလို့ဆိုတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိနေလို့ အမြဲလှနေတယ်လို့ အက်ဒ်မင်က ထင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့လည်း မိတ်ကပ်မပါရင်တောင် ဒီလို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ လှနေကြပါစေနော်။
References : thisisinsider, nordic
မျောဒယျလျတှထေဲမှာ Victoria Secret Model ဆိုရငျကို လုံးဝ အလနျးစားမျောဒယျလျလေးပဲလို့ သတျမှတျခံရပါတယျ။ လြှောကျလမျးပျေါမှာဆိုရငျလညျး နတျမိမယျလေးတှလေို ငေးနရေအောငျလှတာလေ။ မိတျကပျတှေ၊ အဝတျအစားအလနျးတှနေဲ့ ငေးလောကျအောငျလှတယျဆိုတော့ အပွငျလောကမှာရော သူတို့တှကေ ဘယျလိုပုံစံလေးတှဖွေဈမလဲဆိုတာ ကွညျ့ကွညျ့မယျလေ။
Victoria Secret ရဲ့ နတျမိမယျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Candice Swanepoel က ကမ်ဘာပျေါမှာ ဈေးအမွငျ့ဆုံးမျောဒယျလျတှထေဲက တဈယောကျဖွဈပါတယျ။
ဒီပုံက Instagram မှာ သူ တငျထားတဲ့ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက သူ့ရဲ့ ပုံတဈပုံဖွဈပါတယျ။
ဒီပုံကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှဈလောကျက စတငျပွီး Victoria Secret မျောဒယျလျဖွဈလာတဲ့ Romee Strijd ရဲ့ Instagram က ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက ပုံတဈပုံဖွဈပါတယျ။ သူတော့ တျောတျော ကှာတယျနျော… ဟီး.. စငျပျေါမှာ ညှို့အားအရမျးပွငျးပွီး အပွငျမှာတော့ လှလှလေးပေါ့နျော..
Related Artilce >>> လြှောကျလမျးပျေါမှ ထူးထူးဆနျးဆနျးဖကျရှငျမြား
Taylor Hill ဟာလညျး ၂၀၁၄ ခုနှဈလောကျက စတငျပွီး Victoria Secret Model ဖွဈလာခဲ့သူပါ။ ဒီမှာလညျး သူ့ရဲ့Instagram က ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက ပုံတဈပုံကို တှရေ့မှာပါ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ လှတာကတော့ လှတာပဲနျော..
Behati Prinsloo ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှဈလောကျကတညျးက Victoria Secret Model ဖွဈလာခဲ့သူပါ။ ကလေးနှဈယောကျ မိခငျဖွဈတဲ့ သူ့ရဲ့ Instagram က ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက ပုံတဈပုံမှာ ကှာခွားခကျြလေးတှေ တှမွေ့ငျရမှာပါနျော… အကျဒျမငျ့မကျြလုံးထဲတော့ နှဈပုံလုံးမှာ လှနတောပဲ 😀
Lily Aldridge က ၂၀၁၀ ကတညျးက Victoria Secret Model ဖွဈလာခဲ့ပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ ဈေးအမွငျ့ဆုံးရတဲ့ မျောဒယျလျတှထေဲကတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ လြှောကျလမျးပျေါက စူးရှပွတျသားတဲ့ မကျြနှာအနအေထားနဲ့ သူ(မ)ရဲ့ အပွငျက မကျြနှာခြိုခြိုလေးက အတျောကှာခွားတယျလို့ ဆိုရမှာပါနျော..
Elsa Hosk ကလညျး ၂၀၁၅ မှာ Victoria Secret Model ဖွဈလာသူလေးပါ။ သူ့ရဲ့ Instagram မှာ တငျထားတဲ့ ဓာတျပုံတဈပုံ နဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက ပုံတဈပုံကတော့ တျောတျောကှာတယျလို့ အကျဒျမငျထငျမိတာပဲ.. ယောငျးတို့ရော ဘယျလို ထငျလဲ???
Jasmine Tookes ဟာ ၂၀၁၅ မှာ Victoria Secret Model ဖွဈလာကတညျးက ဆိုရှယျမီဒီယာတှမှော လူစိတျဝငျစားခံရသူလေးဖွဈလာတာပါ။ သူ့ရဲ့Instagram မှာ တငျထားတဲ့ ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက ပုံတဈပုံကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ယောငျးတို့ ဘာမွငျလဲတော့မသိဘူး.. အကျဒျမငျတော့ သူ့ရဲ့ ညကျနတေဲ့ အသားကိုမွငျတာပဲ .. လှလိုကျတာ T.T
Related Article >>> 2018 Miss Universe သရဖူကိုဆှတျခူးသှားတဲ့ ဖိလဈပိုငျအလှမယျ Catriona Gray
Victoria Secret Model ဖွဈတဲ့ Alessandra Ambrosio ရဲ့ သူ့ရဲ့Instagram က ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက ပုံတဈပုံတို့ကို ယှဉျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့…. မပွောငျးလဲတာက သူ့ရဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ ထကျမွကျတဲ့ ဟနျပဲလို့ အကျဒျမငျ ထငျပါတယျနျော…
Adriana Lima ဟာ ၁၉၉၉ ခုနှဈကတညျးက Victoria Secret Model ဖွဈလာသူပါ။ သူဟာ လြှောကျလမျးပျေါမှာ သကျတမျးအကွာဆုံးမျောဒယျလျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Instagram မှာတငျထားတဲ့ ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက ပုံတဈပုံတှကေို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပွီး မတူညီတဲ့ အလှတရားတှကေို ခံစားကွညျ့ကွပါဦး ယောငျးတို့ရေ…
Josephine Skriver ကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ စတငျပွီး Victoria Secret ရဲ့ လြှောကျလမျးပျေါရောကျလာသူပါ။ ဒီမှာတော့ Instagram မှာ မိတျကပျမပါဘဲ လှနတေဲ့ သူ့ရဲ့ ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ လြှောကျလမျးပျေါက ပုံတဈပုံတို့ကွားက ကှာခွားခကျြကိုတှနေို့ငျပါတယျနျော။
အခုတှခေဲ့ရတာတှကေ Victoria Secret Model တှရေဲ့ လြှောကျလမျးပျေါကပုံနဲ့ အပွငျပုံတှရေဲ့ ကှာခွားခကျြတှပေါပဲ။ ဒီလိုတှရေ့တော့ သူတို့ဟာ မိတျကပျတှမေပါဘဲလညျး ဆှဲဆောငျမှုရှိနတောမွငျရမှာပါ။
ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အလှပါရမီကောငျးလို့ဆိုတာထကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျခကျြအပွညျ့ရှိနလေို့ အမွဲလှနတေယျလို့ အကျဒျမငျက ထငျပါတယျ။ ယောငျးတို့လညျး မိတျကပျမပါရငျတောငျ ဒီလို ယုံကွညျခကျြအပွညျ့နဲ့ လှနကွေပါစနေျော။
Tags: Cele News, models, no makeup, Run way, Victoria Secret
Sugar Cane February 5, 2019
သြဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်သွားတဲ့ ပရီယန်ကာချိုပရာ
Sugar Cane December 7, 2018
အဒေါ်ဖြစ်သူမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာရဲ့ ခြေရာကိုနင်းမယ့် ကစ်တီစပင်ဆာ
Sugar Cane June 1, 2018